नेपाल–भारत सीमावर्ती जिल्लाहरू लागुपदार्थ दुर्व्यसनको उच्च जोखिममा, बन्यो ‘नेपाल–भारत नसा उन्मूलन समिति’ – Health Post Nepal
नेपाल–भारत सीमावर्ती जिल्लाहरू लागुपदार्थ दुर्व्यसनको उच्च जोखिममा, बन्यो ‘नेपाल–भारत नसा उन्मूलन समिति’
२०७६ जेठ १३ गते १४:०६
खुला सीमानाको फाइदा उठाउँदै लागुऔषध प्रयोगकर्ताको चलखेल बढेपछि नेपाल भारत सीमानामा लागुऔषधको दुर्व्यसन बढ्दै गएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म बाँकेमा लागुऔषध ओसार–पसारमा संलग्न २ सयभन्दा बढी पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका अनुसार, चालू आर्थिक वर्षका १० महिनामा २ सय १६ जनालाई पक्राउ गरिएको हो । जसमध्ये १ सय ४९ जनाले मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
यी लागुऔषध ओसार–पसारमा ९ जना विदेशी पुरुष र २ जना नेपाली महिला संलग्न रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो नेपालगन्ज शाखा प्रमुख बीरबहादुर थापाले सबैभन्दा बढी खैरो हेरोइन, नाइट्रोभ्याट, नाइट्रोजेपामको कारोबार भएको जानकारी दिए । उनले यस अवधिमा ३ सय ३९ ग्राम ६ सय ९० मिलिग्राम खैरो हेरोइन बरामद गरेको जानकारी दिए ।
त्यस्तै, नाइट्रोभ्याट ४ हजार ४८ ट्याबलेट, नाइट्रोजेपाम ८ सय ५१ ट्याबलेट, स्पासमो १ सय ५४ क्याप्सुल, कोरेक्स ५ सय ५० मिलिग्राम, ट्रिगन १ सय ट्याबलेट, चरेस ८ किलो ८ सय २० ग्राम बरामद गरिएको छ ।
पछिल्ला दिनमा नेपाल–भारत सीमावर्ती जिल्लाहरू लागुपदार्थ दुर्व्यसनको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै स्थानीय सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । शनिबार बिहान भारतको सीमावर्ती क्षेत्र रुपेडियामा भएको अन्तरक्रियामा सहभागी सरोकारवालाले दुर्व्यसन न्यूनीकरणमा सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको आयोजना तथा जिल्लामा सञ्चालित सहारा हाउस, प्रेरणा, सामना, नवजीवन, नवदृष्टिलगायत पुनःस्थापना केन्द्रको समन्वयमा अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको साहारा हाउसका सञ्चालक अभिराज क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
तर, विगत ३ दशकदेखि नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा बसेर पत्रकारिता गरिरहेका भारतीय पत्रकार मणिराम शर्माका अनुसार यो समस्या दुवै देशमा उत्तिकै भयावह बन्दै गएको छ । रुपेडियामा दुव्र्यसनकै कारण एक दर्जनभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसक्दा छन् भने तिनका सन्तान अभिभावकविहीन बनेको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा भारतीय सीमाप्रहरी बल एसएसबीका प्रमुख अरुणकुमार सिंहले नेपालीले भारतमा गएर लागुऔषध प्रयोग गर्ने गरेको बताए । उनका अनुसार भारतीय व्यापारीले नेपालीलाई मात्र लागुऔषध बेच्ने गरेका छन् । अशिक्षित भारतीय नागरिक लागुपदार्थ दुर्व्यसन तथा मध्यपानमा बढी फसेका छन् भने नेपालगन्जका शिक्षित व्यक्तिहरू समेत दुव्र्यसनमा फसेको उनले दाबी गरे ।
करिब १५ वर्षअघि रुपेडियामा केहीले मात्र मदिरा र लागुऔषध प्रयोग गर्ने गरेकोमा अहिले व्यापारका रूपमा विस्तार भएकाले समस्या देखिएको रुपेडियाका पञ्चायत प्रधान मोहम्मद जुवेर फारुकीले बताए ।
नेपालमा पनि लागुपदार्थ दुर्व्यसनीमा संलग्न बर्सेनि सयौँलाई पक्राउ गर्ने गरिएको छ । उनीहरूविरुद्ध मुद्दा पनि चलाइएको छ । तर पनि बर्सेनि हजारौँ युवा कुलतमा फस्ने गरेका छन् । लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो नेपालगन्ज शाखाका प्रमुख वीरबहादुर थापा खुला सिमानाका कारण रुपेडिया पुगेर नसा सेवन गर्ने गरेकाले नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनिरहेको बताउँछन् ।
रुपेडियामा किरानापसलमा समेत लागुऔषधको कारोबार हुँदै आएको छ भने सीमावारिको नेपालगन्जमा पनि आन्तरिक व्यवसायकै रूपमा कारोबार मौलाउँदै गएको छ । औषधिलाई दुव्र्यसनका रूपमा प्रयोग गर्ने, व्यापारीले निःशुल्क खुवाउने र लत बसिसकेपछि ग्राहकका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । लागुऔषधको प्रयोगले करिब ४० प्रतिशत युवामा मिर्गौलामा समस्या देखिने गरेको डा. विनोद कर्ण बताउँछन् ।
औषधिको नाममा प्रयोग गराउँदा सीमाका कैयन परिबार नै लतमा डुबेको प्रहरीको भनाइ छ । यो समस्या समाधानका लागि दुई देशका सरोकारवालाले १७ सदस्यीय नेपाल–भारत नसा उन्मूलन समीति गठन गरेका छन् । पत्रकार मणिराम शर्माको संयोजकत्वमा शनिबार नेपाल–भारत नसा उन्मूलन समिति गठन गरिएको हो ।
करिब ३ दशकदेखि भारतको रुपेडियामा बसेर पत्रकारिता गरिरहेका शर्माको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय समिति बनाइएको छ । दुवै देशका सीमावर्ती क्षेत्रका युवा तथा बालबालिका दुव्र्यसनमा फस्नेक्रम बढेपछि त्यसको न्यूनीकरणका लागि दुवै देशका सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, पत्रकार, समाजसेवीलगायत सरोकारवाला सम्मिलित समिति बनाइएको हो ।
दुई देशबीचको समन्वयले मात्र लागुऔषध र दुव्र्यसन न्यूनीकरण गर्न सकिने निष्कर्षमा पुगेका सरोकारवालाहरूले आपसी समन्वय, सहकार्य र सूचना आदान–प्रदान गर्न दुवै देशका सम्बद्ध सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति बनाएको संयोजक शर्माले बताए ।
शनिबार रुपेडियामा भएको छलफल कार्यक्रमले शर्माको संयोजकत्वको समितिमा सशस्त्र प्रहरी बलका डिएसपी राजु शाह, लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो नेपालगन्ज शाखा प्रमुख वीरबहादुर थापा, भारतीय प्रहरी बल एसएसबीका प्रमुख अरुणकुमार सिंह, वडा प्रहरी कार्यालय नेपालगन्ज इन्चार्ज नारायण डाँगी, इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहका इन्चार्ज वसन्त बस्नेत, रुपेडिया थाना क्राइम ब्रान्च प्रमुख हर्षवर्धन सिंह, नेपालगन्ज उद्योग–वाणिज्य संघका महासचिव तारा रोकाय, भेरी चिकित्सक संघ बाँकेका अध्यक्ष डा. विनोद कर्णलगायत सदस्य छन् । समितिले मासिक रूपमा विभिन्न सचेतीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ ।